तपाईं हेर्न योजना छ भने धेरै देशहरूमा युरोप मा रेल द्वारा यात्रा गर्दा यो एक Interrail पास लगानी विचार बुद्धिमानी हुन सक्छ, वा के गैर यूएस नागरिक कल Eurail. एक Interrail पास गर्नेछ आफ्नो रेल यात्रा सजिलो. तथापि, तपाईं एक मा छन् भने तंग बजेट, व्यक्तिगत टिकट सस्ता बाहिर काम गर्न सक्छन् (तपाईं मुख्य रूप को पूर्व यात्रा गर्दै विशेष गरी यदि जर्मनी). आफ्नो बजेट विचार र तपाईं आफ्नो रेल पास बुक अघि केहि अनुसन्धान. हाम्रो वेबसाइट saveatrain.com युरोप भरि आफ्नो यात्रा योजना बनाउन सहयोग गर्ने सुरु गर्न सही ठाउँमा छ.
युरोप मा ट्रेन द्वारा यात्रा को लागी यात्रा को लागी सही आपूर्ति प्याक गर्नुहोस्
धेरै जसो रेलहरूको या त रेष्टुरेन्ट हुन्छ, कि स्यान्डविच बिक्री गरेर आएको क्याफे वाहनो वा खाजा Carts, शीतल पेय र थप. तर तपाईं एक तंग परिभ्रमण बजेट छन् वा यदि विशिष्ट छ आहार आवश्यकताहरू, यसलाई आफ्नो यात्रा सँग केही नाश्ता ल्याउन बुद्धिमानी हुन्छ.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)